Shuruudaha isticmaalka - Carros.com
Saxeex ku soo gal sidii ganacsade Isu diiwaangeli inaad tahay ganacsade
AfgaanistaanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua iyo BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAwstariaAzerbaijanBahamas TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia iyo HerzegovinaBotswanaJasiiradda BouvetBrazilIngiriiska Badweynta HindiyaBruneiBulgaariyaBurkina FasoBurundiKamboodiyaCameroonKanadaKanadaCape VerdeCayman IslandsJamhuuriyadda Bartamaha AfrikaChadChileShiinahaJasiiradda KirismaskaCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Of TheCook IslandsCosta RicaCote D'Ivoire (Ivory Coast)Croatia (Hrvatska)CubaCyprusCzech RepublicDenmarkJabuutiDominikaJamhuuriyadda DominikanEast TimorEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaItoobiyaJasiiradaha FalklandJasiiradaha FaroeFiji IslandsFinlandFinlandFaransiiskaFaransiiska GuianaFrench PolynesiaKoonfurta Koonfurta FaransiiskaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernsey iyo AlderneyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard iyo McDonald IslandsHondurasHong Kong SARHungaryIcelandHindiyaHindiyaHindiyaHindiyaHindiyaHindiyaHindiyaHindiyaHindiyaIndonesiaIranCiraaqIrelandIsraa'iilTalyaanigaJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiNorth KoreaKoonfurta KuuriyaKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgLuxembourgMacau SARMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMan (Isle of)Jasiiradaha MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiyaNauruNepalNetherlands AntillesNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorthern Mariana IslandsNorweyNorweyOmanPakistanPalauDhulka Falastiiniyaanka ahPanamaPapua cusub ee GuineaParaguayPeruFilibiinJasiiradda PitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarIskudhinRoomaaniyaRussiaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Kitts iyo NevisSaint LuciaSaint Pierre iyo MiquelonSaint Vincent iyo GrenadinesSaint-BarthelemySaint-Martin (qaybta Faransiiska)SamoaSan MarinoSao Tome iyo PrincipeSacuudi CarabiyaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSoomaaliyaKoonfur AfrikaKoonfur AfrikaSouth GeorgiaKoonfurta SuudaanSpainSpainSpainSpainSirilaankaSuudaanSurinameSvalbard iyo Jan Mayen IslandsSwazilandIswiidhanSwitzerlandSwitzerlandSwitzerlandSuuriyaSuuriyaTaiwanSoomaaliyaTansaaniyaTaylandTogoTokelauTongaTrinidad iyo TobagoTunisiaTurkigaSomalilandTurks iyo Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineImaaraadka CarabtaBoqortooyada IngiriiskaMaraykankaJasiiradaha Yar-yar ee MaraykankaUruguayUzbekistanVanuatuGobolka Vatican (Quduuska Fiiri)VenezuelaVietnamVirgin Islands (British)Jasiiradaha Virgin Islands (US)Wallis iyo Futuna IslandsGalbeedka GalbeedkaYemenZambiaZimbabwe
Isu diiwaangeli inaad tahay ganacsade
Shuruudaha adeegyadan waa tarjumaad qiyaas ah, shuruudaha adeegga ayaa lagu dabaqayaa qaybta Ingiriisiga ee goobta. Fiiri qaybta Ingiriisiga
1. Shuruudaha isticmaalka
Adigoo galaya website-ka https://carros.com, waxaad ogolaatay in lagu xiro shuruudaha adeega, dhammaan sharciyada iyo xeerarka khuseeya, iyo in aad isku waafaqsan tahay inaad adigu masuul ka tahay fulinta sharciyada deegaanka ee khuseeya. Haddii aadan ku raacsaneyn mid ka mid ah shuruudahaas, waxaa lagaa mamnuucay inaad isticmaasho ama aad gasho boggan. Waxyaabaha ku jira boggan waxaa lagu ilaaliyaa sharciyada iyo xuquuqda ganacsiga.
2. Isticmaal Shatiga
Ogolaashaha waxaa loo siiyaa in si ku meel gaar ah loo soo daabaco nuqul ka mid ah qalabka (macluumaadka ama software) bogga Carros.com ee loogu talagalay kaliya shakhsi ahaan, aan ganacsi ahayn oo ku-meel-gaar ah. Tani waa bixinta liisan, ma aha kala-wareejinta cinwaanka, iyo liisankan liiskan:
wax ka beddel ama nuqul ka samee;
Isticmaal walxaha ujeedo kasta oo ganacsi, ama bandhig fagaare ah (ganacsi ama aan ganacsi ahayn);
Isku day inaad dib u dhigto ama dib u noqotid injineer kasta oo software ah oo ku yaal shabakada Carros.com;
Ka saar wixii xuquuq ah ama qoraalka kale ee macaamiisha; o
u wareejinta alaabta qof kale ama ka tarjumeyso waxyaabaha kale ee adeega kale.
Ruqsaddani waxay si toos ah u joojin doontaa haddii ay jabiso mid ka mid ah xayiraadyadaas oo laga yaabo inay joojiso Carros.com wakhti kasta. Marka la dhameeyo sawirkaaga qalabkaan ama marka la dhammeeyo liiskan, waa inaad baabi'isaa wax kasta oo lagaa soo diray oo aad haysatid, midkasto elektaroonik ah ama daabacan.
Macluumaadka ku yaal bogga Carros.com waxaa lagu bixiyaa "sida". Carros.com wax shuruud ah ma ahan, muujin ama qeexin, oo halkan ku diidaya oo diidaya dhammaan damaanada kale, oo ay ka mid yihiin, aan xadidnayn, damaanad qaadyada la sheeganayo ama shuruudaha ganacsiga, u qalmida ujeedo khaas ah ama aan jabinaynin hantida. Aqoonsi ama xadgudub kale oo xuquuqda. Intaa waxaa dheer, Carros.com ma shardi ah ama ha noqoto wax matalaad ah marka la eego saxnaanta, natiijooyinka suurtagalka ah ama kalsoonida isticmaalka qalabka ku jira boggiisa ama la xiriira qalabkaas ama goob kasta oo ku xiran boggan.
Xaalad kasta ha lahaato Carros.com ama alaab-qeybiyeyaashu waxay masuul ka yihiin magdhowyada (oo ay ku jiraan, kuwa kale, khasaarihii lumay xogta ama faa'iidada, ama ay sabab u yihiin ganacsiyada), oo ka imanaysa isticmaalka ama awood la'aanta isticmaalka qalabka baabuurta. .com website-ka, xitaa haddii Carros.com ama wakiil amar ah oo Carros.com lagu soo ogeysiiyey hadal ama qoraal ahaan suurtagalnimada dhaawaca noocan ah. Sababtoo ah qaar ka mid ah xudduudaha qaarkood ma ogola xaddidaadyo ku saabsan damaanad-qaadyadii la sheegey ama xaddidaadda masuuliyadda khasaare aan toos ahayn ama shilalka ah, xaddidaadahan laguma dabakhayo.
5. Xaqiijinta walxaha
Qalabka ka muuqda shabakada Carros.com waxaa ku jiri kara qalad farsamo, sawir ama sawirro qaldan. Carros.com ma damaanad qaadi karto in mid ka mid ah qalabka website-ka ay yihiin kuwo sax ah, dhameystiran ama hadda. Carros.com waxay isbeddel ku sameyn kartaa qalabka ku jira websaydheeda wakhti kasta iyadoon ogeysiis hore. Si kastaba ha noqotee, Carros.com ma aqbali doonto inay cusbooneysiiso qalabka.
Carros.com ma aysan dib u eegin dhammaan boggaga ku xiran boggeeda internetka, mana ka masuul ah waxyaabaha ku jira boggaga la xiriira. Isku-darka nooc kasta oo ka mid ah maaha mid muujinaysa Carros.com ee goobta. Isticmaalka shabakad kasta oo ku xiran waxay ku jirtaa khatarta qofka isticmaala.
Carros.com waxay dib u eegi kartaa shuruudaha adeega ee boggaaga wakhti kasta iyadoon ogeysiis hore. Adigoo isticmaalaya boggaan, waxaad ku raacsan tahay inaad ku dhaqantid qaybta hadda ee adeegyadan.
8. Sharciyada dowladda
Xeerarkan iyo shuruudahaan waxaa lagu maamulaa oo lagu sifeeyey sida waafaqsan sharciyada Connecticut oo aad si aan macquul ahayn u gudbin karto awoodda gaarka ah ee maxkamadaha gobolka ama goobta.
Ereygan wuxuu wax ku ool yahay ilaa Maarso 27, 2019.
Gawaarida la isticmaalo
Gawaarida iibka ii dhow
Waxaad iska diiwaan galisaa warsideedeena bil kasta.
Wadarta gawaarida iyo gawaarida waaweyn
Twitter Siyaasadaha Asturnaanta Shuruudaha isticmaalka Nagala soo xiriir